ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများစုစည်းဖော်ပြမှု – PVTV Myanmar
⚠️စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်ရှိ ပုလဲမြို့မရဲစခန်းနှင့် မြို့နယ် အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက ယမန်နေ့ညပိုင်းက ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီး ပစ်တ်မှုများကြောင့် လူ၈ ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိကြောင်း ဒေသခံများနှင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခွဲအချိန် ပုလဲမြို့ရဲစခန်းနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည့် ကျားသစ်နက်တပ်ဖွဲ့၊ ဒေါင်းနက်တပ်ဖွဲ့၊ MPL နှင့်မြိုင်အဖွဲ့များ၊ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့များက ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြောင်း ၊ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ပျူစောထီးနှင့်သတင်းပေး ၈ ဦး ထက်မနည်း ကျဆုံးကြောင်း Pale People’s Defence Force – Headquarters အဖွဲ့မှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
⚠️ကချင်ပြည်နယ် ၊ဖားကန့် မြို့နယ်ရှိ မနော့မှော် နှင့် ကပ်မော်ရွာအနီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၂၀၀ခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း KIA နှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များနှင့် ဒေသခံများထံမှ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်မှ စ၍ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာသဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်ညနေတွင် ရဟတ်ယာဥ်များဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်က တပ်သားများအကူပို့ထားသော်လည်း ယမန်နေ့(ဖေဖော်ဝါရီ ၅)ည တိုက်ပွဲတွင် အကူရောက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအပါအဝင်အများအပြားထပ်မံသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်ကတည်းက ဆိုပါက စစ်ကောင်စီတပ်သေဆုံးသူ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်။
သည်းထန်စွာရွာနေသောမိုးအောက်တွင် ယမန်နေ့ညတိုက်ပွဲမှာ ပြင်ထန်ပြီး မနေ့ကမှစစ်ကူထပ်ရောက်လာသော စစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးနီးပါသေဆုံးသွားကြောင်းလည်းအခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ပြောသည်။ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့လည်း ကျဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်က ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်က အထိနာသဖြင့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် အချက်ရေများစွာပစ်ခတ်သလို ၊လေယာဥ်များဖြင့်ပါ ပြည်သူများနေထိုင်သောကျေးရွာများကိုပါ ဗုံကြဲခဲ့သဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦး နေအိမ်ဗုံထိမှန်ပြီး သင်းအုပ်ဆရာကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများက ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်မှ သေဆုံးရုပ်အလောင်းများထဲမှ အရာရှိအလောင်းများကိုသာ လေယာဥ်ဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသည်ဟုလည်း မျက်မြင်တွေ့သူအချို့က ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ကို အထိနာအောင် တိုက်ခိုက်နေသောတပ်မှာ KIA အမှတ် (၄၄)တပ်ရင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF)များကလည်း ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
⚠️အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် သတင်းအချက်အလက်များ⚠️
အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ပြည်သူလူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် နေမှုများကို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုမိမိ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့် အရ၊ ပြည်သူ့ခုခံစစ် (Peoples Defensive War) ကို ဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်များအရ(၅. ၂. ၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင်
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈၃ဦး သေဆုံးပြီး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ – ၁၉ဦး
မေ ၂၄ ရက်တိိုက်ပွဲသတင်းများ စုစည်းဖော်ပြမှု
၂၉-၃-၂ဝ၂၂ ရက်နေ့ ညပိုင်း အချိန် (၂)နာရီတွင် ရဲဘော် ကိုလင်းကိုကိုမောင်နှင့် ရဲဘော် ကိုစောဟယ်ရီတို့ သည်
ပညာရေး သုတေသနလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် Action Research (လုပ်ငန်းသုတေသန) ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပို့ချမယ်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(PDF) ဖွဲ့စည်းခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်နေ့အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်၏ အမှာစကား
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်လို့သာ တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာလို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) တာဝန်ရှိသူပြော၊ ၃ ရက်တာ တိုက်ပွဲအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေ သေဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေများနေ